Awubabhataleli abacebisi ngezeNtlalo | Martech Zone
Awubhataleli Abacebisi ngezeNtlalo
NgoLwesithathu, Septemba 21, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Kugxilwe kubanzi Martech Zone, Ngekhe ndifumane ukukhulisa kwezentlalo njengebhlog enkulu Qinisekisa kunye nokuguqula ufumana (Iposti entle evela kuJay!)… Kodwa ndiyaluxabisa uluntu esakhele kulo Martech Zone.
Oku kutshanje I-Zoomerang Poll songeze kumaqhinga osasazo asekuhlaleni andizalisa ngebhongo… nina bantu nizezentengiso ezintsonkothileyo! Uthatha inxaxheba kwimidiya yoluntu, udibanisa umxholo apho, uhlawulela izixhobo kunye nokunyusa… kunye nokulinganisa imbuyekezo kutyalo-mali. Ukubeka nje… kuhle! Oko kuthetha ukuba sicelomngeni ngokuzisa umxholo wentengiso ophambili kakhulu njengeziseko.
Umntu usenokuzibuza… ukuba Highbridge yintlalo inkampani yabezindaba, kutheni ungonwaba ukuba akukho namnye wabafundi bakho ohlawulelayo ukubonisana nemidiya yoluntu? Kulungile… ndizakuyithetha… akukho mfuneko. Abacebisi beendaba zosasazo loluntu yidime elineshumi elinambini kwaye iziqinisekiso zibonakala njengaye nabani na onokunqumla isigwebo somlinganiswa ali-140 kunye ne-hashtag kunye nesimboli @.
Iinkampani ezityala imali ekubonisaneni nabathengisi kufuneka bachonge abacebisi abanamava okusebenza ngeendlela ezahlukeneyo, zokurhweba kumajelo eendaba eziphakamisa indlela nganye kunye nokwandisa utyalomali kunye nefuthe. Oko kuthatha umcebisi onamava ngakumbi. Uxolo ukuba ndithuke inxenye yabaphulaphuli bam… kodwa ngaphandle kokuba uyayazi impembelelo yentlalo kuphando, iselfowuni, imithombo yeendaba zemveli, i-imeyile, njl njl.
Njani i-Orabrush ingene kwiWalmart
Singabakhonzi abaqinisekisiweyo bakaGoogle
Sep 21, 2011 ngo-2:21 PM
Molo Doug, ndize apha ndilandela ikhonkco elivela kwibhlog kaJay. Into yokuqala endiyiqaphelayo kukuba ikunika ikhonkco elinegama elingundoqo elithe ngqo kwaye ikhonkco lakho elibuyiselayo likwisithuba sakhe kunye nesakhelo sakho esijikelezileyo.
Into yesibini endiyiqaphelayo kukuba akukho nanye kwiinketho kwi-poll ngokwenene amaqhinga. Zizenzo, amaqhinga, kunye neeseti zezenzo. Ukusebenzisa izixhobo zasimahla zomntu wesithathu ayisosicwangciso. Yindlela yokwenza iqhinga.
Ngokufanayo, ukuhlawula umcebisi weendaba zoluntu akuloqhinga. Uhlawula umcebisi weendaba zentlalo ukukunceda ukuphuhlisa, ukuhambisa, kunye nokulungelelanisa isicwangciso.
Into yokugqibela endiyiqaphelayo kukuba ukuyo ngaphandle kokuba uneemetrics ezibuyela kwiinjongo zakho ezicwangcisiweyo, useyi-n00b, kwaye ufuna isikhokelo sobuchwephesha bomcebisi wezentengiso we-Intanethi ofanelekileyo. Iiprops zokutsho njalo.
Sep 21, 2011 ngo-2:35 PM
Ndiyayibulela ikhonkco likaJay! Kuba sithetha ngezixhobo ezininzi apha, sizintywilisela kumakhonkco aphumayo ngoko ke ndivavanya indlela yesakhelo ukubona ukuba iyaziphucula iziphumo zethu ze-SEO kwaphela. Ndiza kubelana ngolwazi kwiposi elizayo.
RE: Amaqhinga, andiphikisani nawe kodwa kunzima ukuchaza ngokupheleleyo i-poll ngaphakathi kwesihloko sokuvota kuphela. Ndanelisekile ukwazi ukuba abantu baqonde injongo emva kokuvota kwaye abazange babanjwe kwi-minutia. Kuye kwafuneka ndizame ukuvelisa 'amanyathelo' kuvoto ukuze ndibone umgangatho wobugocigoci kunye nentsebenziswano iinkampani ezizibandakanye neqhinga labo.
Ayenzeki lula loo nto… kodwa ukuchitha iveki kwi-verbiage kunokuphosa nje uvoto ukuze uve ukuba kukho urhwebo. Bendifuna ukukhupha uvoto phaya. Ukuba olu ibiluphando olusesikweni, olusemthethweni ngokwezibalo, ngendithathe isicwangciso esahluke kakhulu.
Ndithi 'andivumi' ukuba andivumi kuba ndinenkampani ezakhe iqhinga lazo ngokudibanisa umxholo… okanye ndibhatala umntu wesithathu. Isixhobo 'sinokuba' sisicwangciso.
Sep 21, 2011 ngo-2:51 PM
Enkosi ngempendulo ecingisisiweyo! Ndiza kubuya ukufunda izithuba ngakumbi, kwaye ndiyavuya Jay edityaniswe kuwe.
Ndivuma ngokulula ukuba ndine-chip egxalabeni lam xa kuziwa ekuthetheni "ngeqhinga lemidiya yoluntu." Ndiyakholelwa ukuba into eyenziwa yinkampani ayisosicwangciso esibanzi, esiyilwe ngabom, ayisosicwangciso. Endaweni yoko, ngumsebenzi oxakekileyo nje. Ngamanye amaxesha kuyasebenza, kodwa ixesha elininzi kukushiya kanye apho uqale khona, uhlupheka kwaye udiniwe. Yinkonzo kwishishini lethu nanini na xa nabani na enceda iinkokeli zombutho ukuba zibone ukuba leliphi iqhinga ngenene.
Sep 21, 2011 ngo-2:55 PM
Kwaye kufanelekile, Daniyeli! Baninzi kakhulu abantu abajikelezayo kwaye benza umonakalo kwiinkampani ... bebenza ukuba batsibe phambi kokuba babe neqhinga elipheleleyo. Ndiza kulumkisa ngakumbi kwixesha elizayo kunye ne-verbiage yam. Enkosi kwakhona! 🙂
Sep 21, 2011 ngo-3:37 PM
Amen, Doug. Amen. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba udlula ngaphezulu kodwa ndiyaqonda ukuba yayiyingongoma yakho leyo. Umlinganiselo ngundoqo kwaye ukukwazi ukuhambisa imveliso yakho ngexesha kubaluleke ngakumbi.
Sep 21, 2011 ngo-3:42 PM
Ndizamile ukuhlela uluvo lwam kodwa andikwazanga ngenxa yesizathu esithile. Ndiyakholelwa ukuba kunenzuzo ukuqesha umntu ono "iqela le-cross-platform, i-blah-blah, i-corporate lingo, amava eendaba ngokuthe ngqo" kodwa kubaluleke kakhulu ukuqesha umntu ngokusekelwe kwiziphumo. Kungenxa yokuba umntu ungenamava akuthethi ukuba akanakuzisa imveliso enentsingiselo neqhutywa ziziphumo.
Wonke umntu uqala ndaweni ithile.
Sep 21, 2011 ngo-3:51 PM
Andiqinisekanga ukuba ndiyavuma, Kyle. Ukuba umntu akanalo amava, kufuneka athathe ixesha ukuya emsebenzini kwindawo ethile kwaye awufumane. Ndibona iinkampani ezininzi kakhulu zingena kubugxwayiba ngabantu abangenawo amava. Ngokumalunga neziphumo… kufuneka zingaguquguquki phambi kokuba ndibathembe kuhlahlo lwabiwo-mali lwam. Bendingalindelanga nto incinci nakubathengi bam. Asisekho kuqeqesho ... apha phandle kukho imisebenzi kwaye iinkampani zixhomekeke kuthi.
Sep 21, 2011 ngo-4:30 PM
Ndicinga ukuba ndisuka kwisikhundla sam ngaphezu kwayo yonke enye into. Xa ndisakha uqeqesho kwiinkampani, ukunqongophala kwam kwamava enkampani akuyongxaki. Ngoku, ndingavuma ukuba kwintengiso, uphuhliso, kunye nokubonisana unokuba nengxaki. Ndikrazukile kuloo nto. Ndinenkampani iminyaka emi-5 ebingenawo “amava” phambi kokuba siyiqale.
Andiqondi ukuba kufuneka uye “ukusebenza kwindawo ethile” phambi kokuba uqeshwe njengomcebisi okanye umntu onokuzisa ixabiso. Ukuba ndiqeshelwe ukonwabisa iqela elilawulayo okanye ndincedise ekuqulunqeni isicwangciso seshishini elikhulu elingenzi nzuzo… ukuba ndinikezela ngexabiso… akumele kukhathazwe.
Ndinoluhlu olupheleleyo lwabantu abanamava abangaphumelelanga. Andazi ukuba amava ngowona mba… akufanelanga ibe kukukwazi kwakho ukuhambisa loo nto uyithengisayo? Ixesha?
Kwaye ndikholelwe, ndiphuma kwimbono yokuthengisa into kwaye ndiyasilela… Ndicinga ukuba sonke siyenzile.
Sep 21, 2011 ngo-4:40 PM
Andiqondi ukuba unxibelelana nam kwindawo 'yamava'. Ubungakhe uqeqeshe iinkampani ngendlela eyakha ngayo inkampani ngokusebenzayo… ubusenza uqeqesho ekusebenziseni ngokukuko imidiya yoluntu, akunjalo? Kwaye ufundiswe ekuphuhliseni uqeqesho, akunjalo?
Ke… yinto obukade unamava kuyo… kwaye uqeqesho lwakho lube yimpumelelo. Ndingakuqeshela loo nto… kodwa andizukuqesha ukuze uncede ishishini lam lingene kwinkqubo entsha yokhathalelo lwempilo xa ungenamava apho, akunjalo?
Ngokungaphumeleli, andinakuze ndisebenze nabantu ukuba bathi abazange baphumelele. Ndicinga ukuba into endiyithethileyo kukuba "babefana" kumandla abo okufumana iziphumo. Oko ngokuqinisekileyo kushiya indawo yokusilela. Kodwa andizophinda ndiqeshe umcebisi othi, “ukuza kuthi ga ngoku, ndisebenze nabathengi abasi-8 kwaye andiphumelelanga ukufumana iziphumo zaba-4 kubo”. 🙂
Sep 21, 2011 ngo-8:10 PM
YONKE iMedia iqhagamshelwe (akukho pun ecetywayo yeZuck). Ukubiza abo babizwa ngokuba ngabacebisi kumajelo eendaba ezentlalo “nge-dime elinesibini” akukwenzi okusesikweni. Ndihamba nawe ngekhulu lepesenti kwaye ndifumene umqolo wakho bhuti.
Sep 26, 2011 ngo-5:49 PM
"Abacebisi kumajelo eendaba ezentlalo balishumi elinambini kwaye iziqinisekiso zibonakala ngathi nguye nabani na onokusika isivakalisi se-140 kunye ne-hashtag kunye nesimboli ye-@."
Phantse lihlazo elingazange lingene kwiimpawu ze-140.
Ewe, ukuba ulikholwa kumgaqo weyure we-10,000, kuya kuba nzima ukuba nabani na abe yingcali kumajelo asekuhlaleni; ayikabikho xesha lide ngokwaneleyo.
Ngelixa kwinkomfa yeNgcaciso ekuJoliswe kuyo, uJay Baer waphawula ukuba “imidiya yoluntu ingumsebenzi ngoku, kodwa kungekudala iza kuba sisakhono. Njengokuchwetheza okanye ukwenza iikopi. Sasikade sinabo abantu baloo nto, emva koko saqonda ukuba kusebenza ngakumbi ukuba wonke umntu unesakhono.” (Ngandlel’ ithile uchaze ngenye indlela.) Noko ke, ndicinga ukuba mhlawumbi uchanile.
Sep 26, 2011 ngo-5:57 PM
Laa mfo kaJay Baer ngomnye olilungisa!